October 8, 2019 - ThutaSone
October 8, 2019 ThutaSone 0
အ ချိူ့​သော အိမ်​​တွေဟာ အိမ်​သား အချင်းချင်း မသင့်​မြတ်​တာ /​ငွေဝင်​သမျှအ​ကြောင်းရှာပြီးကုန်​ကျ​နေတာ /အိမ်​သား​တွေ ကျန်းမာ​ရေးမ​ကောင်းတာ စသည်​ဖြင့်​ …. တစ်​မျိူးပြီး တစ်​မျိူးဖြစ်​ပြီး အိမ်​ပူ၍ စီးပွားမတက်​ဖြစ်​​နေတတ်​ပါတယ်​။​အောက်​​ဖော်​ပြပါ အစီအရင်​ များကို ပြုလုပ်​ပါ။ နံနက်​ ၆နာရီတွင်​ဖြစ်​​စေ ည​နေ ၆နာရီတွင်​ ဖြစ်​​စေ လှူဒါန်းပါ။ အေ […]
အဆိုတော်ဖြိုးပြည့်စုံနဲ့အတူ အဖမ်းခံရတဲ့ လေးဘာသာဂုဏ်ထူး ရှင် ညီလေး ငြိမ်းချမ်းကို ဆိုတာ….
အောင်လအန်ဆန်းနဲ့ ယှဉ်ထိုးလိုခြင်းမရှိပေမယ့် ရွှေခါးပတ်ကြောင့် ထိပ်တိုက်တွေ့ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုလာတဲ့ ဗီရာ
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသား လက်ဝှေ့အကျော်အမော်ဟာ ဆိုရင် မြန်မာ့စပါးအုံးလို့ ခေါ်ကြတဲ့အောင်လအန်ဆန်နဲ့ လာမည့် တနင်္ဂနွေနေ့မှာ ချန်ပီယံခါးပတ်လုပွဲကို ဂျပန်နိုင်ငံမှာယှဉ်ပြိုင်ကြတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပြိုင်ပွဲအတွက် ဝိတ်တန်းကိုက်ညီစေဖို့အတွက် ဗီရာဟာ လက်ရှိဝိတ်ကို လျော့ချထားရသလို ၊ အောင်လအန်ဆန်ကလည်း တိုးအောင်ဆောင်ရွက်ထားရတာဖြစ်ပါတယ်။ လာမည့် ပြိုင်ပွဲအတွက် ဗီရာက အောင်လအန်ဆန်နဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ထိုးသတ်လိုစိတ်မရှိပေမယ့်လည်း လက်ရှိချန်ပီယံခါးပတ်ဟာ သူ့ဆီမှာ […]
ဒုတိယမြောက် ပြည်ချစ်ဘုရားရောင်းချဖို့ ပင့်ဆောင်သွားပေမယ့် လမ်းမှာတင် ဘယ်မှ ဆက်ပင့်သွားလို့မရတော့
နမ့်ခမ်းမြို့တွင် ရောင်းချရန်အတွက် ပင့်ဆောင်ထားသော မြတ်စွာဘုရားဆင်းတုတော်အား အိပ်မက်အရ မြန်မာပြည်သို့ပြန်မည်ဟုဆိုသောကြောင့် ပြန်လည်ပင့်ဆောင်လာရာ ကျောက်မဲမြို့နယ် နောင်ပိန်လမ်းခွဲတွင် ခေတ္တနားခိုရာမှမည်သို့မျှအခြားနေရာသို့ပင့်ဆောင်မရတော့ပဲ ယာယီကိန်းဝပ်စံပါယ်လျက်ရှိသောကြောင့် သွားရောက်ဖူးမျော်သူများဖြင့်စည်ကားလျက်ရှိကြောင်းသိရှိရပါသည်။ သွားရောက်ဖူးမျော်လိုလျှင်ကျောက်မဲမြို့နယ်၊ နောင်ပိန်လမ်းခွဲတွင်ဖူးမျော်နိုင်ပါကြောင်း။ သော်တာထိုက် ( လားရှိုး ) Photo By KoPauk Myowinaung Zawgyi နမ့်ခမ်းမြို့တွင် ရောင်းချရန်အတွက် […]
“နှစ်ပေါင်း (၃၀) ကျော် ခွင့်မယူသည့် ဆရာမများအား ဆုချီးမြှင့်” 😱
ဦးထွန်းလွင်ပြောသည့် မိုးကြိုးပစ်ခြင်း အန္တရာယ်
ဦးထွန်းလွင်ပြောတဲ့ မိုးတိမ်တောင်နှင့် မိုးကြိုးပစ်ခြင်း အန္တရာယ်အကြောင်း လက်ရှိကာလဟာ မိုးတိမ်တောင်များ အဖြစ် များလေ့ ရှိ တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအရပ်ရပ်သို့ မုတ်သုံလေ၀င်ရောက်နေစဉ် ကာလ ဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာကြီးပေါ်တွင် (၁)စက္ကန့်လျှင် မိုးကြိုး အကြိမ်(၁၀၀)ခန့် ပစ်ခတ် မိုးကြိုးပစ်ခြင်း အန္တရာယ် မောင်ထွန်းလွင်(မိုးလေ၀သ) […]
“Silica Gel Bags တွေကိုဘာလို့ လွှင့်မပစ်သင့်တာလဲ” မုန့်ဘူးတွေ ကင်မရာဘူးတွေ ဖိနပ်ဘူးတွေထဲမှာ Silica Gel Bags လို့ခေါ်တဲ့ ဂျယ်လီလို အလုံးလေးတွေ အစေ့လေးတွေ ပါတဲ့ အိတ်လေးကို တွေ့ဖူးကြမှာပါ။ ဒီအထုပ်လေးတွေကို တွေ့တာနဲ့ အသုံးမလို လောက်ဘူး အန္တရာယ်ရှိမလားမသိဘူးဆိုပြီး လွှင့်ပစ်လိုက်ကြပါတယ်။တကယ်တမ်းမှာတော့ ဒီအိတ်လေးတွေက […]
သြစတြေးလျနိုင်ငံ၊ စွတ်စိုထိုင်းမှိုင်းတဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်မျိုးမှာ ကောင်းမွန်စွာ ရှင်သန်ကြီးထွားနိုင်တဲ့ မှိုတစ်မျိုးကတော့ အဆိပ်ပြင်းထန်လို့ ထိခြင်း၊ ကိုင်ခြင်းကနေ ရှောင်ရှားကြဖို့ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေက သတိပေးထားပါတယ်။ အဲဒီမှိုကို F i rec o ralfu n […]
အဆိုတော် ဖြိုးပြည့်စုံ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်း ခံရတာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ကော်နီ ပြောပြီ
မူးယစ်ပုဒ်မ ၄၄ /၂၀၁၉ ပုဒ်မ ၁၉(က) /၂၁ နဲ့ ဗဟန်းမြို့မ ရဲစခန်းမှာ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားရတဲ့ အဆိုတော် ဖြိုးပြည့်စုံနဲ့ပတ်သတ်ပြီး လူမှုကွန်ယက်တွေမှာ ဝေဖန်မှုတွေများနေပါတယ်။ အဆိုတော်ဖြိုးပြည့်စုံဟာလည်း သူ့ထံမှ ရရှိတဲ့ ဆေးပြားတွေဟာ မူးယစ်ဆေး မဟုတ်ကြောင်းကို ထွက်ဆိုထားပါတယ်။ ဖြိုးပြည့်စုံနဲ့ပတ်သတ်ပြီး အနုပညာလောကမှာ တော်တော်ဂယက်ရိုက်နေခဲ့ပါတယ်။ ဆရာဝန်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး […]
“ပေးကမ်းစာချုပ်” ချုပ်မယ်​ဆိုရင် စိန်၊ ရွှေအစရှိသော ရွေ့​ပြောင်းနိုင်​တဲ့ ပစ္စည်းတွေကို​ပေးကမ်းတဲ့​နေရာမှာ​ စာချုပ် ချုပ်ပြီိးပေးကမ်းလို့လည်းရတယ်၊ စာချုပ်မချုပ်ဘဲလည်း ပေးလို့ရပါတယ်။ မြေ၊ အိမ် အစရှိတဲ့ မ​ရွေ့မ​ပြောင်းနိုင်တဲ့ ပစ္စည်းတစ်စုံတစ်ရာကို​ ပေးကမ်းမယ်ဆိုရင်တော့​ ပေးကမ်းခြင်း စာချုပ်ပြုလုပ်ရပါမယ်။​ ပစ္စည်းပိုင်ရှင်အ​နေနဲ့ မိမိပိုင်ပစ္စည်းတွေကို မိမိဆန္ဒအ​လျောက် ပေးကမ်းခွင့်ရှိတယ်လို့ အ​ခြေခံသ​ဘောအားဖြင့် ဆိုရမှာဖြစ်ပေမယ့် မိမိပိုင်ပစ္စည်းအားလုံး​ […]